Konke mayelana nezikhwama zezinja: izinhlobo nokuthi ungonga kanjani! | Izinja Umhlaba
USusana godoy | | Izesekeli zezinja
Izikhwama ze-dog poop ziyisihlanganisi esidingekayo kakhulu, njalo lapho sihambahamba ngezinwele zethu. Ngoba kuzoba yisikhathi lapho bethatha khona ithuba lokuzikhulula nathi, siwaqoqe, sigcine izindawo zethu zomphakathi zihlanzekile. Njengoba zisisekelo futhi zidingekile, kufanele futhi sazi izinhlobo zazo nobuhle bazo ngamunye.
Ngoba emsebenzini ofana nalokhu sihlala sidinga izinto ezinhle kakhulu kepha songa kakhulu ngangokunokwenzeka futhi yize kungabonakala kungafani nakho, singakufeza. Kumele ulandele iseluleko esikushiya ngaso, ukuze unakekele isilwane sakho kepha nemvelo ukuthi kwesinye isikhathi siyakhohlwa kancane.
1 Izinhlobo zezikhwama zezinja
1.2 Izinto ezibolwayo
1.4 Kusuka kushayina
2 Ungayonga kanjani imali uthenga izikhwama zezinja
3 Isikhwama senja ngayinye: Kubalulekile
Izinhlobo zezikhwama zezinja
Izikhwama ze-YORJA ze ...
Kuyiqiniso ukuthi ezikhathini eziningi sishibhile ngalolu hlobo lwezesekeli, ukuze zenze umsebenzi wazo futhi akukho okunye esizokuqaphela. Kepha kuyiqiniso ukuthi ikhwalithi kwesinye isikhathi ayiyona le esiyidingayo. Ngakho-ke, kufanele siqinisekise njalo ukuthi inani lemali lingaphezu kokuqinisekiswa. Kubukeka sengathi namuhla sithola izinketho ezinconywayo, enziwe ngezinto ezinhle ezisiza imvelo ngakolunye uhlangothi, nephakethe lethu. Vele, bangaba mncane kancane kunamanye amamodeli. Ngaphezu kwalokho, uma kuyizikhwama ezijwayelekile, akuvamisile ukuthi kube semvelweni.
Zingenye yezinketho ezikhethiwe ezikhwameni zezinja. Kufanele wazi ukuthi okokusebenza okubolayo okubolayo kuzobola ngokwemvelo ngokuhamba kwesikhathi.. Lokhu kubukeka kukuhle kuqala, kepha kuvela ukuthi isikhathi esiqondile asaziwa futhi kungathatha unyaka kuya emashumini eminyaka. Iningi lenziwa ngesitashi sommbila, okusho ukuthi kungokwemvelo nokuthi kungalahlwa ngesikhathi esincane kunalokho okushiwo. Amelana kakhulu futhi enza umsebenzi wawo ngo-100%.
Inqubo yokwenza umquba ayishiyi noma yiluphi uhlobo lwensalela enobuthi, ngakho-ke kungokwemvelo kakhulu. Lolu hlobo lwezikhwama zemfucumfucu yenja luhlambalaza ngendlela engokwemvelo, njengoba sishilo. Kusho ukuthini? Akhiqiza isikhutha kanye namanzi nezinhlanganisela ezingaphili kepha ngaphandle kokushiya enye insalela engabeka engozini imvelo.
Ziba umquba ophilayo wenhlabathi. Ngakho-ke, uma kukhulunywa ngokubakhetha, bahlala kuqala kuqala ohlwini, bengavumi uma kuziwa ekusebenziseni.
Kwesinye isikhathi ngokungami ukuze sifune izikhwama ezinhle kakhulu, sigxumela kokunye esiseduze, okuyizitolo zezomnotho. Kukhona njalo eyodwa eseduze nasekhaya futhi lapho sizothola izinhlobo ezahlukahlukene zezikhwama. Kepha kuyiqiniso ukuthi uma ubheka, imvamisa iba mincane impela futhi lo mbono awuhlali umuhle ngaso sonke isikhathi, ngoba kuvame kakhulu ukuthi aphule nokuthi lapho ususa indle ubabheka kakhulu, sengathi uphethe esandleni sakho. Ngakho-ke akuyona inketho eluleka kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Ungayonga kanjani imali uthenga izikhwama zezinja
Sikhathazekile ngakho konke ngokujwayelekile, kepha kuyiqiniso ukuthi amaphakethe ethu athe xaxa. Kwesinye isikhathi sichitha isikhathi esiningi siqhathanisa eminye imikhiqizo nabanye, ezinye izinketho noma izitolo nabanye, kepha asazi ukuthi yisiphi isinyathelo okufanele sisithathe ukufeza ukonga okushiwo. Kanjalo, into ehamba phambili kulezi zimo ukuthenga amaphakethe aqukethe amayunithi amaningi. Ukuthenga ngobuningi kuhlale kungesinye sezixazululo ezinhle kakhulu. Ngoba yize ekuqaleni kufanele sikhokhe imali ethe xaxa, ngokuhamba kwesikhathi kuyakhokha.
Njengoba uma siqala ukwenza izibalo, isikhwama ngasinye sizobe seshibhile ngokuqhathaniswa nokuthenga amayunithi ambalwa. Ngakho-ke, akubalulekanga nje kuphela ukuthi uhlale nesibalo esisibona kuqala, kepha kunalokho ukucabanga ngokuthi iyunithi ngalinye libiza malini.
Izikhwama ze-BPS® Poop ...
Isibonelo esihle yilawo maphekhi anezinyunithi ezingaphezu kwama-200, kubukeka sengathi kuningi, kepha ngokuqinisekile sizosebenzisa ngamunye wabo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho singonga khona kulesi sengezo esidingeka kakhulu.
Isikhwama senja ngayinye: Kubalulekile
Ukuze zonke izikhwama zihleleke kahle noma zigcinwe kahle, akukho okufana nemishini yazo. Njengoba igama layo liphakamisa, luhlobo lwesitsha lapho zonke izikhwama zizophuma khona. Kuhlale kungumqondo omuhle ukungavumeli ukuthi ngamunye wabo aphonswe phansi ekhabetheni. Kuyiqiniso ukuthi uma uthenga iphakethe, bavame ukuza nayo. Ngamanye amagama, kuyisisekeli esibalulekile.
I-dispenser yesikhwama se-Poop
Kepha kwesinye isikhathi sithola ukuthi bangaphuka futhi ngenxa yalesi sizathu, akufanele sikhathazeke ngoba kukhona nezingxenye zokungcebeleka. Yebo, ama-dispensers angathengwa ngokuhlukile ezikhwameni futhi ngaphezu kwalokho, kunezitolo eziningi esezivele zizithengisa ngezinhlobo nemibala ehlukahlukene kakhulu, ukuze okwangempela kuhlale kukhona. Ungayithatha uhambe nayo ukuze ungalokothi uswele izikhwama ze-dog poop!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izikhwama zezinja